Mbola tiana ihany isika na dia efa nania aza
“Anaka, izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy hanotanareo. Ary raha misy manota dia manana solovava ao amin’ny Ray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina” 1 Jao. 2:1
Ireo izay mifandray amin’Andriamanitra dia fantsona hikorianan’ny herin’ny Fanahy Masina. Raha misy olona iray mifandray isan’andro amin’Andriamanitra nandeha nivily lalana dia nisy ny fotoana nihodinany tsy nibanjina an’i Jesosy, nefa tsy noho ny sitrapony no nanotany, fa rehefa mahita ny fahadisoanay izy, dia hiverina indray, ka hampifantoka ny masony eo amin’i Jesosy, ary ilay toe-javatra izay nampania azy dia tsy hampihena kely akory ny fitiavana azy ao am-pon’Andriamanitra. Fantany fa manana fifandraisana amin’ny Mpamonjy izy; ary raha hoentina eo anatrehan’ny fitsarana mba hanarina noho ny fahadisoany izy, dia handeha tsy hitanondrika, na hanome tsy an’Andriamanitra, fa hamadika kosa ilay fahadisoana ho fandresena. Mianatra lesona iray avy amin’ny tenin’ny Tompo izy, ary hitandrina fatratra mba tsy ho voafitaka intsony.
Ireo izay tena tia marina an’andriamanitra dia hahatsapa tanteraka ao anatiny ao fa izy dia olona malalan’Andriamanitra, olona manana fifandraisana amin’i Kristy, ary ny fony dia nohafanain’ny fitiavana miredareda Azy. Ny fahamarinana tamin’izany fotoana izany dia ninoana tamin’ny fahatokiana marina. Afaka miteny amim-pahatokiana tanteraka izy ireo hoe: “Fa tsy nanaraka izay anganongano noforonin’ny fahafetsen’ny saina izahay, raha nampahafantatra anareo ny hery sy ny fihavian’i Jesosy Kristy tompontsika; fa efa hitan’ny masonay ny fiandrianany (...). Ary manana ny teny faminaniana atao mafy orina kokoa isika; koa raha mandinika izany hianareo, dia manao tsara, fa toy ny jiro mahazava ao amin’ny fitoerana maizimaizina izany, mandra-pahazavan’ny andro ka miposaka ao am-ponareo ny fitarik’andro” 2 Pet. 1: 16-19
Ny fiainana anatin’ny fanahy iray dia hiseho ho azy ety ivelany amin’ny fitondran-tenany. Aoka ny tenin’Andriamanitra hitondra ny vavolombelony amin’ny anaran’ilay iraka izay nalefany hitondra hafatra ho amin’izao andro farany izao, mba hanomana ny olona hijoro amin’ny andron’ny Tompo. “Akory ny hatsaran’ny tongotr’iry mitondra teny soa mahafaly ery an-tendrombohitra, sady mitory fiadanana! Dia izay mitondra famonjena, eny izay manao an’i Ziona hoe: Mpanjaka Andriamanitro!” Isa. 52:7
Ny fahendrena avy amin’ireo olona antsoina hoe manam-pahaizana dia tsy azo anoloana izany mihitsy, raha tsy hoe efa nianatra angaha izy ireo ary isan’andro, mianatra ny lesona ao amin’ny sekolin’i Kristy. Ny olona, amin’izay heveriny ho fahendrena, dia afaka hamolavola drafitra sy haminavina foto-kevitra sy fomba fampianarana ny filozofia, fa ny Tompo kosa dia miantso azy ireny ho zava-poana sy hadalana. Hoy ny Tompo: “Fa ny fahadalan’Andriamanitra dia hendry noho ny olona; ary ny fahalemen’Andriamanitra mahery noho ny olona” 1 Kor. 1:25